Semalt: Musa ukugxininisa iGoogle ukuzonda indawo yakho
uJack Miller, u-8 (Semalt uMphathi oyiNtloko kuMpumelelo weMthengi, uxwayisa ukuba iGoogle inokwenza iblogi yakho okanye i-website yakho ibonakale kwimiphumo yokukhangela xa uzama ukukhohlisa ngeendlela ezisezantsi okanye ukukhangela igama elingundoqo. Ngokomzekelo, ukuba unika izithuthi ezininzi kwiwebhusayithi yakho kwaye iyaqhubeka ikhula kwizithuba ezimbalwa, i-Google iya kukwaziswa malunga naloo nto, kwaye zonke izithuba kunye namaphepha ewebhusayithi yakho ekugqibeleni ziyophela kwiimiphumo zalo zophando. Kwaye into eyona nto kukuba awusoze waxwayiswa ngayo. Uza kulahleka kwi-intanethi, kwaye udumo lwewebhusayithi yakho lungahle lonakaliswe.
Ukuba uthe wathengela iinqununu kumntu okanye okuthiwa inkampani ehloniphekileyo ye-SEO, kukho amathuba ukuba i-Google ihlawulise indawo yakho - unifi ac pro zero hand off unifi. Ukuba udala amakhulu ukuya kumawaka ekhonkco kwaye uzama ukuza kukhasi lokuqala, awukwazi ukuphumeza iziphumo ezifunwayo. I-Google ikholelwa ukuba ukuthenga iziqhagamshelo ngumsebenzi omnyama we-SEO kunye nazo zonke ezinye iinjongo zokukhangela zibiza ngokuba ugaxekile. Iisayithi ezingahloneliyo kunye namajelo eendaba yoluntu anikezela ngeekhonkco ezihlawulwayo, ezingenanto. Ngoko, akufanele uhambe naluphi na olu khetho.
Ukudibana neZalathisi eziHlangeneyo ezingalunganga
Ukuba ujoyine i-link engafanelekanga, ufanele ususe kuzo ngokukhawuleza. Uninzi lwezikhokelo luza kufaka i-URL yakho ngokungathandabuzekiyo, kwaye yiloo nto i-Google ayithandi kakhulu..Iinjini zokukhangela ziqwalasela ubuninzi beenkcukacha njengento yogaxeko ophantsi, ngoko ke akufanele ubenze ukukhetha kwaye ukhangele iirejista zekhwalithi kuphela. Matt Cutts evela kuGoogle ithi ikhonkco zerejista ziyingxenye yezona ndawo ezingacaciswanga kwaye ezingaqondakaliyo ze-SEO.
Ukuba awunakuva malunga nokuthengiswa kwinqaku, makhe ndikuxelele ukuba kuye kwaphela iminyaka. Ingcamango ukubhala amanqaku, ukuguqulela iinguqu zayo ezahlukeneyo nokwenza utshintsho oluncinane kumagama. Emva koko ii-blogger zihambisa ezo manqaku kwiindawo ezahlukeneyo ze-backlinks. Amawebhusayithi ahloniphekileyo namashishini, nangona kunjalo, ungahambi nalolu khetho. Ukuba ukholelwa ukuba i-Article base okanye i-E-Zine ingakuzisa iziphumo eziphezulu, wenza iphutha elikhulu kwaye unokubona iwebhusayithi yakho ilahlekile kwimiphumo ye-injini yokusesha.
Kukhuselekile ukutsho ukuba igama eliphambili lokugxila alikho ubungqina kwiwebhusayithi nayiphi na indleko. Ukuba usebenzise ezininzi zamagama kunye namagama kwiqendu elilodwa, i-Google iza kukhawuleza iyancipha izinga lakho kwaye ingonakalisa idumela lakho. Ukugxilongwa kwegama elingundoqo kuthetha ukuba usebenzisa amaninzi amagama angundoqo ngokugqithiseleyo kumxholo wakho, kwaye ukuba uthemba ukuba kuya kukufumana indawo efanelekileyo, ayiyi kukunceda nangayiphi na indlela.
Inkxalabo ephezulu yeGoogle ilahlekisa itekisi engavumelekanga. Ukuba awukwazi nto malunga naloo nto, makhe ndikuxelele ukuba i-anchor itekisi ibhekisela kwisicatshulwa ngaphakathi kwekhonkco ethile. Kuthelelwe ukwakha iinqununu kwiwebhusayithi. I-Google isanda kuhlaziywa i-algorithm yayo, kwaye izibhalo zesikhombi ezingavumelekanga ngoku zibhekwa njengegaxekile.
Umele uhlolisise iwebhusayithi yakho kwiinqununu eziphukileyo kwaye ulungise iikhowudi ze-HTML. Phinda le nkqubo kathathu ngeveki ukuqinisekisa ukuba indawo yakho ihambelana nemigaqo ye-Google. Injini yokukhangela ayithandi iiwebhsayithi ngezixhobo eziphukileyo okanye ezingenalusizo, ngoko ke akufanele uhambe naloo nayiphi na indleko.